Uzbekistan Visa | IVisa eya eUzbekistan | natvisa.com
Isicelo se-Uzbekistan Visa kwi-Intanethi
Urhulumente wase-Uzbekistan uqalise inkqubo entsha nelula yokufumana i-visa yase-Uzbekistan, evumela abahambi bamazwe angaphandle ukuba bafumane imvume yabo yokuhamba kwi-intanethi. Olu khetho lwe-eVisa aluvulelekanga wonke umntu, kodwa kumazwe akhethiweyo ali-101. Abemi bala mazwe banokufumana i-visa yabo ngexesha elifutshane kakhulu. Konke ekufuneka bekwenzile kukugcwalisa ifom yesicelo, ukulayisha amaxwebhu afunekayo kunye nokwenza intlawulo. Yonke le nkqubo ilula kakhulu kwaye ilula, yiyo loo nto isenza ukuba abahambi bakwazi ukufumana i-visa yabo ngaphandle kokundwendwela i-Embassy okanye balungise idinga.
Ukufaka isicelo se-visa e-Uzbekistan, abafaki-zicelo kufuneka banikezele ngala maxwebhu alandelayo. Zizo-ikopi ekhutshiweyo kwiphepha leenkcukacha zakho zencwadana yokundwendwela ifoto yomenzi-sicelo kunye nekopi efundwe kwiphepha lokugqibela lepaspoti (ukuba ikhona). Abafakizicelo kufuneka babe nepasipoti esemthethweni, xa befaka isicelo se-eVisa e-Uzbekistan. Kufuneka isebenze iinyanga ezi-6 okanye nangaphezulu.
Xa ufaka isicelo se-eVisa, kufuneka wenze i-imeyile efikelelekayo. I-id ye-imeyile ibalulekile kwinkqubo yesicelo, ukufumana uhlaziyo lwenqanaba levisa kunye nokufumana i-eVisa yokugqibela.
Emva kokufika kwisikhululo seenqwelomoya sase-Uzbekistan, kuya kufuneka ungenise i-eVisa yakho evunyiweyo kwaye iprintwe kwabasemagunyeni.
Kuya kufuneka uphinde ubonise amaxwebhu okuhamba ukufika e-Uzbekistan. Ipaspoti oyiphetheyo kufuneka isebenze ubuncinci iinyanga ezi-6 okanye nangaphezulu
Iinkcukacha zeVisa zaseUzbekistan
Yintoni iVisa yaseUzbekistan?
Ukuya kwilizwe langaphandle njenge-Uzbekistan kufuna ukuhamba ukufumana imvume yokuhamba, kuphela emva koko baya kuvunyelwa ngaphakathi elizweni. Indlela eqhelekileyo yokufumana i-visa ibandakanya ukutyelelwa kwindlu yozakuzo, ukulungisa idinga kunye nezinye izinto. Nangona kunjalo, urhulumente wase-Uzbekistan uzise inkqubo ye-visa ye-elektroniki. Kule nkqubo, abafake izicelo banokufaka izicelo kwi-Intanethi kumaxwebhu abo okuhamba ngaphandle kokwenza nayiphi na le misebenzi ingentla. Inkqubo ye-eVisa yindlela ehlelwe kakhulu kwaye elula yokufumana i-visa, eqhutywa kwi-Intanethi. Oku kwenza ukuba kube lula kubemi bamazwe ahlukeneyo ukuba bafake izicelo zokundwendwela nakweyiphi na indawo abafuna ukuya kuyo, nkqu nakutofotofo lwamakhaya abo.
Ungasifaka njani isicelo seVisa ekwi-Intanethi
Ukufaka isicelo se-eVisa e-Uzbekistan kwenziwe kwaba lula kakhulu ngenkqubo esandula ukwaziswa yesicelo se-visa. Kukho amanyathelo ama-3 ekufuneka umfaki-sicelo awalandele ukugcwalisa inkqubo yokwenza isicelo. Zezi zilandelayo:
Gcwalisa ifom yesicelo: Inkqubo yokwenza isicelo iqala ngokuzalisa ifom yesicelo ye-eVisa. Le fomu ifumaneka ngokulula kwi-intanethi, kwiwebhusayithi karhulumente. Kuya kufuneka ukhuphele le fomu, uphendule imibuzo ebuziweyo, ugcwalise lonke ulwazi ngokuchanekileyo kwaye uye kwinqanaba elilandelayo.
Ngenisa amaXwebhu okuSkena: Emva kokuba ifom yesicelo ye-Uzbekistan eVisa igqityiwe kufuneka ulayishe amaxwebhu. Qiniseka ukuba unawo onke amaxwebhu alungile kwaye uwavavanye ngokucacileyo nangokuchanekileyo.
Yenza iNtlawulo yeVisa: Isinyathelo sokugqibela siquka ukuhlawula inkqubo yesicelo se-visa. Njengoko inkqubo ikwi-intanethi ngokupheleleyo, intlawulo yevisa inokuqhutywa kwi-Intanethi, usebenzisa ikhredithi esemthethweni okanye ikhadi ledebhithi.
Emva kokuba ifom yesicelo icutshunguliwe, i-eVisa yakho iya kuthunyelwa kuwe nge-imeyile id.
Umyalelo wabakhenkethi abafaka isicelo seVisa yabakhenkethi yaseUzbekistan
Urhulumente wase-Uzbekistan uvumela amazwe ali-101 ukuba afake isicelo se-visa ngenkqubo ye-elektroniki. La mazwe yiAlbania, China, Hong Kong, India, Kuwait, Macedonia, Oman, Saudi Arabia, Thailand, United States, Antigua neBarbuda, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Bhutan, Bolivia, Cambodia, Cameroon, Colombia, Colombia. , Costa Rica, Ivory Coast, Cuba, Dominica, Cape Verde, Ecuador, Egypt, El Salvador, Fiji, Gabon, Ghana, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Jordan, Kiribati, Korea, Laos, Lebanon, Maldives, Marshall. Iziqithi, iMauritius, iMexico, iMicronesia, iMorocco, iNauru, iNepal, iNicaragua, iPalau, iPanama, iParaguay, iPeru, iPhilippines, iQatar, iSt. Kitts kunye neNevis, iSt. Lucia, iSt. , KwiiSolomon Islands, eMzantsi Afrika, eSri Lanka, eSuriname, eTonga, eTrinidad naseTobago, eTunisia, e-Uruguay, eVanuatu, eVenezuela, eVietnam. Makungabikho kungangqinelani phakathi kolwazi olunikwe kwi-eVisa kunye nakwipaspoti. Nawuphi na umahluko unokukhokelela ekugatweni kwesicelo.
Yintoni i-eVisa yabakhenkethi eya e-Uzbekistan?
Urhulumente wase-Uzbekistan usungule i-eVisa, eyinkqubo ye-elektroniki yokubonelela nge-visa kwi-intanethi. Olu xwebhu lokuhamba luyafuneka kuye nawuphi na umhambi otyelele iUzbekistan.
Isebenza ixesha elingakanani iVisa yaseUzbekistan evunyelweyo?
I-eVisa evunyiweyo isebenza iintsuku ezingama-90.
Ngawaphi amaxwebhu ayimfuneko ukufaka isicelo se-Uzbekistan eVisa?
La maxwebhu alandelayo ayimfuneko ukufaka isicelo se-Uzbekistan eVisa -ikopi ekhutshiweyo kwiphepha leenkcukacha zakho zencwadana yokundwendwela, ifoto yomenzi-sicelo kunye nekopi efundwe kwiphepha lokugqibela lepaspoti (ukuba ikhona).
Ngawaphi amaxwebhu ekufuneka ndiwenzile ukufika kwam e-Uzbekistan?
Kuya kufuneka ungenise i-eVisa yakho evunyiweyo kunye nepasipoti esemthethweni ukufika kwakho kwisikhululo seenqwelomoya sase-Uzbekistan.
Ngaba ndiza kubuyiselwa imali ye-visa, ukuba ndirhoxisa isicelo sam sevisa?
Hayi, awuyi kunikwa mbuyekezo xa uhlawule umrhumo wevisa.
Zingaphi izinto ezingeniswa yi-eVisa yase-Uzbekistan?
Nge-eVisa yaseUzbekistan, uya kuvunyelwa ungeniso olunye, kabini kunye nokuphindaphinda.
Kufuneka ubunyani bobunyani bepaspoti yokufaka isicelo se-eVisa?
Ipaspoti yakho kufuneka isebenze iinyanga ezi-6 kwaye ibenelona phepha lingenanto elingenanto.
Zeziphi iindlela zokuhlawula ezikhoyo ukuhlawula umrhumo we-eVisa?
Unokusebenzisa idebhithi okanye ikhadi lokuthenga ngetyala ukuhlawula umrhumo wase-Uzbekistan we-eVisa.
Ndingayijonga phi imeko yevisa?
Ungajonga imeko yakho ye-visa kwi-imeyile yakho, apho uza kufumana khona isaziso.
Ndingayiqokelela phi i-eVisa yam?
Unokufumana i-eVisa yakho yokugqibela evunyiweyo kwi-imeyile yakho.